Maxkamadda gobolka Banaadir oo Xukun ku riday xubno ka tirsan DF Soomaaliya | HalQaran.com
Home Warar Cusub Maxkamadda gobolka Banaadir oo Xukun ku riday xubno ka tirsan DF Soomaaliya
Maxkamadda gobolka Banaadir oo Xukun ku riday xubno ka tirsan DF Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Khamiista maanta ah xukun ku riday shaqsiyaad ka tirsan Wasaaradaha Xukuumadda Federalka Soomaaliya, kuwaasi oo lagu helay dambi ah inay lunsadeen xoolo dadweyne.
Kiisaska arrintaan la xiriira oo muddo soo jiitamaayay, ayaa ugu dambeyn maxkamadda Gobalka Banaadir waxa ay soo saartay xukunka ay muteysteen shaqsiyaadkan oo qaarkood ay ku jiraan xubno ganacsato ah.
1 – Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda Wasaaradda Kalluumeysiga Iyo Kheyraadka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim waxa ay Maxkamadda ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 2,366 dollar iyo in uu qasnadda dowladda ku celiyo $137,907 dollar iyo ka reebista xafiis dadweyne.
2 – Milkilaha Shirkadda Maamuus Generaal Contarcting and Service iyo Madaxa Hubinta Commitment Control ee Xafiiska Xissaabiyaha Guud Ee dowladda Cali Sheekhdoon Cabdi waxaa lagu xukumay 9 Sano oo Xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 3549 dollar iyo in qasnadda dowladda uu ku celiyo $58,505 dollar, ganaaxa waxaa wehliya ka reebid xafiis dadweyne.
3 – Aweys Xasan Cumar xisaabiye ka tirsan waaxda Wasaaradda Warfaafinta waxaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax lacageed $1183 dollar.
4 – Khadar Aweys Xasan Maamulka Shirkadda Alxabiib Business Centre waxaa lagu xukumay Saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1183 dollar, waxaana dhamaan mas’uuliyiinta la xukumay ay Maxkamaddu sheegtay in uu u furan yahay racfaan ku siman muddo 30 maalmood ah.
Waxay aheyd 24-kii Bishaan, markii Maxkamadda Gobolka Banaadir ay xukuno isugu jira Xabsi iyo Ganaax lacageed ku riday Agaasimayaal ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka kuwaas oo lagu helay fal la xiriira lunsasho hanti dadweyne.
Maxkamadda xukun ku riday shaqsiyaad